Iikhowudi zeVenkile yeApple zikwafikelela kwimirhumo | IPhone iindaba
Iikhowudi zeeVenkile zeApple zikwafikelela kwimirhumo
Njengoko usazi kakuhle, iVenkile yeApple inika ithuba lokuba ababhekisi phambili babonelele iikhowudi zokufunyanwa kwesicelo kunye nokuthengwa kwangaphakathi nohlelo, ngale ndlela banokumilisela «Unikezo» okanye imikhankaso yokwazisa ukuvelisa abasebenzisi abaninzi ukuvavanya usetyenziso. Nangona kunjalo, besinomcimbi olindelekileyo.
Ngoku ekugqibeleni iApple ikhethe ukunika iVenkile yeApple ubhetyebhetye kulo mba. Abaphuhlisi ngoku baya kuba nakho ukwabelana ngeekhowudi "zobhaliso" kwezo zicelo zinayo le nkqubo endaweni yeentlawulo ezihlanganisiweyo. Ngaphandle kwamathandabuzo ukusebenza endingenakuyiqonda kakuhle indlela iApple engazange idibanise ngayo ngaphambili.
Yile nto i-Apple inxibelelanise nabaphuhlisi:
Ukuphela kwalo nyaka ukubakho kokunikezela ngeekhowudi zobhaliso kubasebenzisi kuya kufumaneka. Ezi khowudi ziyingqayizivele kunye ne-alphanumeric zinokubonelelwa simahla ngokupheleleyo okanye ngokunikezelwa okukhethekileyo ngenketho yokuhlaziya ngokuzenzekelayo. Unako ukuhambisa iikhowudi zokusebenzisa zodwa ngokwamanani nangeziganeko ezibonakalayo, kwaye ubabandakanye nezinye iimveliso zekhompyutha.
Abasebenzisi abasebenzisa i-iOS 14, i-iPad OS 14 okanye iMacOS Big Sur baya kuba nakho ukubakhulula ngeVenkile yeApp ye-iOS, nge-URL nangaphakathi kwesicelo ngokwaso enkosi kwi-API entsha.
Ngale ndlela, iApple isombulula umbuzo abaphuhlisi abawufunayo ixesha elide, yiyo loo nto Kwakungekho ngqiqweni ukuba kuthathelwe ingqalelo ukuba imodeli "yokubhaliselwa" yeyona nto ine-boom enkulu kule minyaka idlulileyo, Kwaye ukuba ukubhaliswa ayisiyiyo into yayizolo, phantse zonke izicelo zihlala nemodeli yezoqoqosho. Nokuba kunganjani na, siyathemba ukuba siza kukwazi ukuzisa iikhowudi kungekudala nonke, jongani i-iPhone News.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Izaziso » Iikhowudi zeeVenkile zeApple zikwafikelela kwimirhumo
Ilungile kubaphuhlisi, kodwa kuthi abathengi beapp, baya kusibiza ngento enokuthi ibe yexesha elinye okanye yasimahla. Oku kuya kuba ngokokubona komthengi ngamnye ukuba asuse usetyenziso okanye angenise kwiintlawulo zobulungu.
Ngokoluvo lwam, ukuba isicelo siya kule ndlela, kuya kufuneka ndibone ukuba ungayenza njani imfuduko yedatha (ukuba iyafuneka) kwaye ndiye kusetyenziso olulinganayo lwasimahla, intlawulo yexesha elinye, ukuyenza kwikhompyuter okanye ephepheni .
Olu luvo lubonisa amarhe aziswe kwi-iPad Air 4 entsha
IPodcast 11x48: NgoSeptemba nango-Okthobha yabelana ngayo